Wararka - Transformer-ka ayaa la hawlgeliyay
1 Ka hor inta aan shaqada la gelin, dhammaan qaybaha transformerka waa in la nadiifiyaa oo la tirtiraa.
2 Xaaladda xakamaynta korantada aan culeyska lahayn, qaybta isku xirka ee tuubada xakamaynta cadaadiska waa in lagu xiraa booska u dhigma iyadoo loo eegayo calaamadda magaca;
3 Xeerarka korantada korka saaran, fadlan tixraac buug-tilmaameedka korantada-load-ka-sareysa, oo deji heerka ilaalinta xad-dhaafka ah ee ilaalinta korantada kor-u-qaadka dab-damiska iyada oo loo eegayo hadda la qiimeeyay ee korantada-sare dhinac.loo adeego.
4 Marka transformerku ku qalabaysan yahay nidaamka xakamaynta heerkulka, fadlan tixraac buug-tilmaameedka qalabka xakamaynta heerkulka.
5 Transformer-ka waa in la xiro oo la geliyo isagoon wax raar ah qaadin.Qiimaha ugu sarreeya ee xiritaanka qulqulka qulqulka hadda wuxuu gaari karaa 8 ilaa 10 jeer ka la qiimeeyay hadda.
6 Ka dib marka dhammaan aaladaha ilaalinta la geliyo shaqada, transformer-ku waxa uu sameeyaa shoog xidhid la'aan 5 jeer (10 daqiiqo ayay u dhaxaysaa mar kasta), waana in aanay jirin wax aan caadi ahayn.
7 Ka dib marka transformerka la shaqeeyo, culeysku waa inuu ahaadaa mid fudud ilaa mid culus, oo hubi in alaabtu leedahay qaylo aan caadi ahayn.Si indho la'aan ah ha u saarin culeys weyn shaqada.
8 Kadib marka uu taransfooriyuhu shaqa waayo, guud ahaan waxa dib loo hawl gelin karaa iyada oo aan la qaadin tallaabooyin kale.Si kastaba ha ahaatee, haddii ay ku jirto heerkul sare oo Transformer-ku leeyahay uumi, waa in la qalajiyo ka hor inta aan taransfooriyaha dib loo hawlgelin.